Martin Keown oo ku baaqay in xiddig ka tirsan Arsenal gabi ahaanba laga saaro shaxda koowaad ee kooxda – Gool FM
(London) 26 Feb 2021. Halyeeyga Arsenal ee Martin Keown ayaa ku baaqay in tababare Mikel Arteta uu safka koowaad ka saaro xiddiga da’ada yar ee reer Norway Martin Ødegaard.
Taageerayaasha kooxda Arsenal ayaa aad ugu faraxsanaa heshiiskii amaahda ahaa ee Martin Ødegaard ay kala soo wareegeen Real Madrid muddo lix bilood ah, laakiin ciyaaryahanka ayaan weli la qabsanin kooxda ilaa iyo haatan, maadaama uusan soo bandhigin wax qabad fiican.
Haddaba wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay halyeeyga kooxda Arsenal ee Martin Keown, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Tababaraha wuxuu arkaa waxa uu arko, laakiin aniga ahaan, Martin Ødegaard ma ahan inuu ka mid noqdo safka koowaad ee kooxda, sababtoo ah waa mashruuc kale oo aan waqti loo heynin, ma jiro waqti aan ku lumino.”
“Waa inaan guuleysano kulammada, wuxuuna muujiyay inuusan diyaar u aheyn taas, wuxuu heystaa daqiiqado uu ku muujin karo tayadiisa,.”
“Balse Smith Rowe ayaa diyaar u ah inuu booskan si wanaagsan uga shaqeeyo, haddii aan tababare noqon lahaa waxaan ku celin lahaa Smith Rowe booskiisa.”